Ziziphi ii-Holistic Admissions zeeKholeji / iiYunivesithi?
Kubafundi nabazali Inkqubo yoLwamkelo lweekholeji
Ziziphi i-Holistic Admissions?
Uninzi lweekholeji ezikhethiweyo zelizwe kunye neeyunivesithi zivunyelwene ngokubanzi, kodwa oko kuthetha ukuthini umfaki sicelo?
"Ubungqina" bunokuchazwa njengokugxininisa kumntu wonke, kungekhona nje ukhethe iziqwenga ezenza umntu wonke.
Ukuba iikholeji idibene ngokupheleleyo, izikhulu zamagosa ezamkelwayo zesikolo ziqwalasela umenzi-sicelo, kungekhona nje idatha egciniweyo njengeGPA okanye izikolo ze-SAT.
Iikholeji ezinezicelo ezihambelana ngokupheleleyo azifuni nje ukukhangela abafundi abanamabanga amabakala. Bafuna ukuvuma abafundi abanomdla abaza kuba negalelo kwintlalo yeenkampus ngeendlela ezinentsingiselo.
Ngaphantsi komgaqo-nkqubo wokungeniswa opheleleyo, umfundi ophethe i-3.8 GPA unokuguqulwa ngelixa umdlali wexilongo onokufumana umvuzo ene-3.0 GPA angamkelwa. Umfundi obhala isicengue se-stellar angafumana ukhetho kumfundi owayenomgangatho ophezulu we-ACT kodwa isingeniso se-bland. Ngokubanzi, ukuvakaliswa okupheleleyo kukuqwalasela iimfuno zomfundi, ukuthanda, iitalente ezikhethekileyo kunye nobuntu.
Abantu abamkelweyo kwiYunivesithi yaseMaine eFarnington bachaza kakuhle umgaqo wabo opheleleyo, ngoko ke ndiya kubelana ngamagama abo apha:
Sinomdla kakhulu kunobani kunye nento enokuyizisa kuluntu lwethu lweqela le-campus kunokuba kwenzeka ntoni kumanqaku kwi-high-pressure, i-high-stakes test standardized test.
Sijonge ukuphumelela kwesikolo sakho esiphakamileyo, imisebenzi yakho yangaphandle, imisebenzi yakho kunye namava okuphila, imisebenzi yenkonzo yoluntu, ubugcisa bezakhono kunye nokunye. Zonke ezizodwa, iimpawu zomntu ezenza wena ... wena.
Xa sihlolisisa isicelo sakho sithatha ixesha kunye nokunyamekela ukwazi wena njengomntu, kungekhona njengenombolo kumaphepha amanqaku.
Izinto eziqwalaselwa phantsi kwe-Holistic Admissions:
Uninzi lwethu luyavuma ukuba lukhethwa ukuba luphathwe njengomntu kunombolo. Umngeni, eqinisweni, uthumela kwiikholeji ukuba yintoni eyenza ... wena. Kwikholeji enee-admissions ezipheleleyo, zonke ezi zinto zibaluleke kakhulu:
Iirekodi eziqinileyo zemfundo ezinezifundo ezinzima. Ingxelo yakho kufuneka ibonise ukuba uluhlobo lomfundi owenza umngeni kunokuba aphephe. I-GPA yakho ithetha kuphela inxalenye yebali. Ngaba usebenzise i-AP, IB, i-Honors, kunye / okanye izifundo ezimbini zokubhalisa xa zikhethwa kuwe?
Iileta ezikhazimulayo zengcebiso . Yintoni ootitshala bakho nabacebisi bakho bathi ngawe? Yintoni abayibona njengempawu ezichazayo? Ngokuqhelekileyo utitshala unokuchaza amandla akho ngendlela efanelekileyo kwiikholeji ekuqwalasela ukukuvuma.
Inomdla kwimisebenzi yecandelo lexeshana . Akunandaba nokuba wenza ntoni, kodwa ukuba unomdla wento ngaphandle kweklasi. Ubunzulu kunye nobunkokeli kwindawo yecandelo elongezelelweyo liya kuba yinto ephawulekayo kunokuba kutyhutyhwe inxaxheba kwimisebenzi emininzi.
Isincoko yesicelo sokuphumelela . Qinisekisa ukuba isicatshulwa sakho sibonisa ubuntu bakho, ingqondo yakho ebukhali kunye nezakhono zakho zokubhala. Ukuba uceliwe ukuba ubhale iincwadana ezongezelelweyo, qiniseka ukuba zilungelelaniswe ngokucophelela isikolo, kungekhona i-generic.
Wabonisa umdla . Azikho zonke izikolo ezithatha oku kuqwalasela, kodwa kwiikholeji eziqhelekileyo zifuna ukuvuma abafundi abaya kwamkela isibonelelo sokwamkelwa. Ukutyelela i-Campus, ukusetyenziswa kwangaphambili, kunye nokwenza iincwadana ezongezelelweyo zengcamango ziyakwazi ukudlala ngokubonisa umdla.
Udliwano-ndlebe olunamandla . Zama ukwenza udliwano-ndlebe nangona kunjalo. Udliwano-ndlebe ngenye yezona ndlela ezigqwesileyo zekholejini ukuba zikwazi wena njengomntu.
Gcina ukhumbule ukuba nangona kuvunyelwene ngokupheleleyo, iikholeji ziya kwamkela nje abo bafundi abacinga ukuba baya kuphumelela kwizifundo. Kwiikholeji ezikhethiweyo kakhulu, amagosa angenayo aya kufuna abafaki-sicelo abanomdla abanamabanga aphakamileyo kunye namanqaku ovavanyo olulinganiselweyo.
Bonke Abantu Ngokunyuka Abadala
Barton College Admissions
IiYunivesithi zabafundi beB no-C
I-Capitol Technology University Admissions
Yintoni iKholeji yoLuntu?
Yisiphi isigqibo sokuqala?
Yintoni eyenziwa Ngethuba lokuqala?
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data kwiiKholeji eziphezulu zaseNorth Carolina
IBhayibhile YeBhayibhile Ngabantwana
I-Cancer neLibra Uthando olufanelekileyo
Indlela yokufumana iNqaku leMagazini
Iimpendulo Zemibuzo Yakho NgeZongezelelo zeMagnesium
Iqela leebhokhwe alikho 'iCongress'
Yakha IQumrhu Eligqibeleleyo lokuDlala
Iliso likaHorus: Uphawu lwesiYiputa laseYiputa
Iingcaphuno ezingama-20 zokukhupha intliziyo ebuhlungu
Iindawo eziPhezulu: Ukujonga kwiiNdlu zabaLungisi
Funda iNdaba yoLwandle Olufile
I-Star Trek: I-Transport Matter Exantaneous
Ininzi engaphantsi kwee-90s Bands
Quotes Strength Quotes
I-80s Iingoma eziphezulu zeGitars Acoustic
Umkhulu wePlanetary's Older Planetary "Ukhona"
Iyiphi Ipesenti Yobuntu Bomntu Eyasetyenziswa?